Guyana Civil Aviation Authority (GCAA) inoda kutangazve nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Guyana Civil Aviation Authority (GCAA) inoda kutangazve nendege
Airlines • Kuputsa Kufamba Nhau • Guyana Breaking News • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo Guyana Civil Aviation Authority (GCAA) nezuro yakati iri kushanda nevashandi vepamba kuti vatangise mabasa anodikanwa emukati mechikepe, ayo akamiswa neChitatu chapfuura, kunyangwe vagari venharaunda dzekumhiri kweGuyana vatove kunetsana nekukanganiswa kwehupenyu hwavo.
Chirevo kubva kuGCAA:
Kutevera kumiswa kwe shuttle mashandiro evashandisi vemweya vepamhepo muna Nyamavhuvhu 30, 2017, iyo Guyana Civil Aviation Authority (GCAA) iri kushanda nevashandi vepamhepo kuongorora uye kubvumidza gwara nemaitiro gwaro rekufambisa mashandiro.
Iyo GCAA yatora iyo International Civil Aviation Organisation mashanu matanho maitiro ekubvumidzwa kwebhuku revashandisi pamabasa e shuttle. Maitiro acho anosanganisira 1) Pre-kunyorera chikamu, 2) Chikumbiro chikamu, 3) Gwaro kuongorora, 4) Kuratidzira uye Kuongorora uye 5) Certification.
Iyo GCAA inoziva nezve zvemagariro nehupfumi kukosheswa kwekumiswa kunyanya kune vanogara hinterland. Vakuru veGCAA vari kushanda kutenderera nguva kuti vaongorore zvakatumirwa nevashandisi. Kusvika pari zvino zvinyorwa zvakagamuchirwa neGCAA kubva kuNational Air Transport Association (NATA) uye Trans Guyana Airways.
Zuva rese nhasi Nyamavhuvhu 2, 2017, iyo Authority's Flight Operations Inspector yaive mungarava yeTrans Guyana Airways ichiitisa kuratidzira kuona kuti maitiro akanyorwa anoonekwa neanoshanda. Kuongorora kwakaitwa pakumhanya kwendege muOlive Creek, Blake Slater uye Kamarang aerodromes.
Zvichienderana nekutariswa kwekuratidzira, Trans Guyana Airways inofanirwa kugadzirisa bhuku ravo mushure mezvo kupihwa humbowo hwekufambisa kwavo kunofanirwa kuzadzikiswa musi weChitatu Gunyana 6 kana 2017 asati asvika.
Zvichakadaro, iyo GCAA iri kushanda pamwe nevamwe vanoshanda kuti vaunze mashandiro avo mukuteerera kuti ivo vazivikanwe nezvekuita shuttle.
Iyo GCAA inosimbisazve kuti chiito chayo chaive chakakosha kusimudzira kuchengetedzeka kwevoruzhinji vanofamba nevashandi vevendege. Chiremera chichaenderera mberi nekuwedzera kuongororwa kweVanoshanda neMhepo.